Ny tsara indrindra amin'ny herinandro amin'ny soydeMac | Avy amin'ny mac aho
Apple I ao amin'ny fako, nalefa tamin'ny WWDC tao amin'ny Apple TV, Thunderbolt 3 dia mandeha amin'ny USB-C, orinasa Apple any Irlandy ary betsaka kokoa amin'ny Best of the week amin'ny hoe avy any Mac aho
Peter Rhodes | | Apple, Apple TV, About us, Solosaina Mac
Herinandro iray hafa indray no hiarahanay aminao miaraka amin'ny fananganana lahatsoratra mahaliana sy hita indrindra ao amin'ny Soy de Mac. Mbola misy ora sisa hanatrehanay ny lahateny fototra an'ny WWDC 2015 izay hatao rahampitso ary antenainay Fantaro izay vaovao ao amin'ny rafitra fiasa OS X 11 sy iOS 9.
Ankehitriny, tsy izany ihany no antenaina satria maro ny tsaho milaza fa fanavaozana ny Apple TV ankehitriny ary iza no mahalala ny zavatra hafa. Mety zavatra iray hafa ve?
Manomboka amin'ny lahatsoratra iray izay faran'izay kely indrindra izahay ary izany dia vehivavy iray, akaikin'i Palo Alto, ilay toerana namoronana ny solosaina Apple voalohany, taorian'ny nahafatesan'ny vadiny dia nanapa-kevitra ny hanadio ny garazy an-tranony miomana izy boaty junk elektronika telo boaty izay nanjary madio. Ny zava-misy dia ny iray amin'ireo mpiasa, andro vitsivitsy taorian'ny nandaozan'ilay Ramatoa ireo boaty tao, dia nanamarina azy ireo ary nahita Apple I iray miorim-paka. Izy ireo izao no mitady ilay vehivavy hanome anao $ 100.000, antsasaky ny vola nataonao tamin'ny fivarotana azy tamin'ny mpanangona.
Herintaona indray dia nanapa-kevitra ireo ao Cupertino fa afaka manao izany isika araho mivantana amin'ny Apple TV la Keynote fototra WWDC 2015. Ny Fihaonambe Manerantany ho an'ny mpamorona dia kasaina handefa mivantana amin'ny alàlan'ny fandefasana video amin'ny Alatsinainy 8 Jona amin'ny 10:00 alina ora Espaniôla. Ao amin'ilay fantsona mihitsy no ahafahantsika mamaky ny "You can see this event live at 10.00 (local time) on 8 June".
Manova kely ny lohahevitra dia hampahafantatra anao izahay ny inona no vaovao ao amin'ny Thunderbolt 3 vaovao. Manana hafainganam-pandeha vaovao izy ary ho setrin'izany dia fantantsika fa ampitaina amin'ny endrika USB-C, ny fenitra vaovao izay nanomboka nipetraka tao amin'ny MacBook 12 santimetatra. Mazava ho azy, fantatsika ihany koa fa amin'izao fotoana izao, ny USB-C an'ny MacBook 12 tsy hamely ny hafainganan'ny Thunderbolt 3 izany.
Tonga amin'ny faran'ny famoronana izahay miaraka amin'ny lahatsoratra iray izay anehoanay anao ny sarin'ny orinasa iray ananan'i Apple any Irlandy. Hafahafa be izany Apple avelao ny tsipika fivorianao tamin'ny haino aman-jery, saingy toa te-hanome fikitihana mangarahara ny orinasa i Tin Cook amin'ireo hetsika ireo.
Manohy mahatadidy ny vaovaon'ny herinandro izahay ary na dia eo aza ny kely dia manantena isika fa amin'ny WWDC 2015 dia holazaina ny fandefasana firenena manaraka izay hamidy ny Apple Watch, efa lasa kely ny raharaha ary fantatsika fa ny Ny 26 Jona dia hamidy any Espana. Mazava ho azy, Apple dia nitatitra an'io modely io 42mm habakabaka mainty tsy maintsy miandry kely kokoa isika.
Ary mba hamaranana an'ity fanangonana ity dia manasa anao izahay hamaky indray ny lahatsoratra izay vinaninay iza ny anarana hoe ny rafitra miasa vaovao ny an'ny Mac manomboka rahampitso.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple I ao amin'ny fako, nalefa tamin'ny WWDC tao amin'ny Apple TV, Thunderbolt 3 dia mandeha amin'ny USB-C, orinasa Apple any Irlandy ary betsaka kokoa amin'ny Best of the week amin'ny hoe avy any Mac aho
Famosaviana mekanika eo amin'ny lakilen'ny habakabaka amin'ny MacBooks 12-inch
Inona no azon'ny Apple atao hoe OS X 10.11?